Fraịdee 24 Septemba 2021
Ụlọ Nnụnụ N'ihi ndụ dị oke egwu na enweghị mmekọrịta na Nature, mmadụ na-ebi ndụ na-emebi emebi mgbe niile na afọ ojuju nke afọ, nke na-anaghị enye ya ohere ịnụ ụtọ ndụ n'ụzọ zuru ezu. Enwere ike idozi ya site na ịgbasa ókè nke nghọta na inweta ahụmịhe ọhụụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Gịnị kpatara nnụnụ? Theirbụ abụ ha na-emetụta ahụike uche mmadụ, ọ na-echekwa gburugburu ebe obibi site na ahụhụ. Ihe oru a Domik Ptashki bu ohere iji me ka ndi agbata obi aka nyere gi aka ma nwaa ime ihe ichoro site na ilele na ilekọta umu nnunu.
Robot Na-Elekọta Anụ Ụlọ
Tọọzdee 23 Septemba 2021
Robot Na-Elekọta Anụ Ụlọ Ebumnuche nke onye rụrụ ya bụ idozi nsogbu dị n’ịzụlite ụlọ 1 mmadụ. Ọrịa nchekasị nke ụmụ anụmanụ na nsogbu anụ ahụ sitere na ogologo oge nke ndị na-elekọta. N'ihi obere oghere obibi ha, ndị na-elekọta ụlọ na-esoro ụmụ anụmanụ na-emekọ ihe, na-akpata nsogbu ịdị ọcha. Site na isi ihe mmuta, onye mmeputa weputara robot nlekọta nke 1. na - egwu ma soro umu anumanu mekorita ihe site na ichogharia, 2. sachapu ahihia na mgbe emechara ulo, 3. zuo ike.
Modul Ngwá Ụlọ Flọtin
Wenezdee 22 Septemba 2021
Modul Ngwá Ụlọ Flọtin Ọ bụrụ nwamba, o nwere ike ịbụ na ịnwere ihe abụọ n’ime nsogbu atọ ndị a mgbe ị na-ahọrọ ụlọ maka ya: enweghị ọgwụgwọ, nkwado na nkasi obi. Mana modul pendant a na-edozi nsogbu ndị a site na ijikọta ihe atọ: 1) Imewe obere ihe: ịdị mfe nke ụdị na mgbanwe nke ụdị agba; 2) Enyi-enyi na enyi: mkpo ahihia (ahihia, ihe ndoro ndo) bu ihe oma maka pusi na nke onye nwe ya; 3) Mahadum: a na - ejikọ ibe ya na ibe ya, na - enye gị ohere ịmepụta ụlọ pusi dị iche n'ime ụlọ gị.
Tiuzdee 21 Septemba 2021
Olu Nkịta Nke a abụghị naanị Dog Collar, ọ bụ Dog Collar nwere ihe olu na-apụ apụ. Frida na-eji ezigbo akpụkpọ anụ eji ọla kọpa siri ike. Mgbe ị na-echepụta mpempe a ọ ga-atụle ụzọ dị mfe echedoro iji kọọ ihe olu ebe nkịta ahụ na-eke olu. Olu olu aghaghi inwe olu okomoko nke na enweghi olu olu. Site na usoro a, akwa olu na-apụtaghị ọnụ, onye nwe ya nwere ike ịchọrọ nkịta ha mma mgbe ha chọrọ.
Mọnde 20 Septemba 2021
Cinnamon Na Mmanụ
Mbọsị Ụka 19 Septemba 2021
Cinnamon Na Mmanụ Eluigwe Diliki bụ paịlị nke mmanụ a pureụ juru dị na tii. Ebumnuche bụ ijikọ nri abụọ a na-eji iche iche ma mepụta ngwaahịa ọhụrụ. Ndị ọrụ ime mmụọ kpaliri site na ụdị nke paịlị, ha na-eji mpempe osisi ya dị ka akpa mmanụ a honeyụ na iji paịlị paịlị ha jiri beeswax wee kewapụ ma na-etinye mkpọ oloko. O nwere onyogugu ndi Egypt gosiputara n’elu ya ma nke ahu bu n’ihi ndi ndi Egypt bu ndi mbu gh’uru ihe di nkpa. Ngwaahịa a nwere ike ịbụ akara nke eluigwe na iko tii gị.
Ụlọ Nnụnụ Robot Na-Elekọta Anụ Ụlọ Modul Ngwá Ụlọ Flọtin Olu Nkịta Olu Nkịta Cinnamon Na Mmanụ